အမေရိကသမ္မတ အိုဘားမား၏ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်း – Remarks by President Obama at the University of Yangon | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အမေရိကသမ္မတ အိုဘားမား၏ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်း – Remarks by President Obama at the University of Yangon
အမေရိကသမ္မတ အိုဘားမား၏ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်း – Remarks by President Obama at the University of Yangon
Posted by kai on Nov 19, 2012 in Myanmar Gazette, News, Opinions & Discussion | 41 comments
ကျွန်တော်ဒီကို ရောက်လာခဲ့တာဟာ ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရဲ့ လှပတင့်တယ်မှုနဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေ ကြောင့်ပါပဲ။ ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာ ရွှေရောင်လွှမ်းနေတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို ဖူးမြင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ အချိန်ဆိုတဲ့အရာကို လွန်မြောက်တဲ့ မေတ္တာတရားဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာ-ကျွန်တော်တို့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ အချိန်ကာလကို သည်းခံမှု(ခန္တီ)နဲ့ ချစ်ခြင်း(မေတ္တာ) ဆိုတဲ့ အရာတွေနဲ့ ဖွင့်ဆိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေဟာ ကျွန်တော့်ရင်ကို လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြေဟာ ဒီမြို့ဟောင်းကြီးရဲ့ လူနေထူထပ်တဲ့ ရပ်ကွက်ဝန်းကျင်တွေကနေ ကျေးရွာပေါင်း ၆၀၀၀၀ ကျော်အထိ၊ ဟိမ၀န္တာတောင်ထွတ်ဖျားကနေ၊ ကရင်ပြည်နယ် သစ်တောတွေအထိ၊ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းပါးတွေအထိ ကျယ်ပြောတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကို ရောက်လာခဲ့တာဟာ ဒီတက္ကသိုလ်ကို လေးစားမှုကြောင့်ပါပဲ။ ဒီကျောင်းမှာ ကိုလိုနီအုပ်စိုးမှုကို အတိုက်အခိုက်ပြုမှုဟာ ပထမဆုံး စတင်ခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို မဦးဆောင်မီ ဒီနေရာမှာ (ဗိုလ်ချုပ်)အောင်ဆန်းဟာ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကို တည်းဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကို မကွပ်ကဲမီ ဒီနေရာမှာ ဦးသန့်ဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ လားရာတွေကို ဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်က ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတွေ အားကောင်းခဲ့သလို ကျောင်းသားတွေဟာလည်း အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ အခုနေအခါမှာတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လွှတ်တော်က ဒီကျောင်းတော်ကြီးကို ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သလို ဒီကျောင်းတော်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကို ပြန်လည်ရယူရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကို လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးက အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ကျွန်တော်သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်တုန်းက အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်စိုးနေတဲ့ အစိုးရတွေဆီကို ”ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လက်သီးဆုပ်ကို ဖြည်ဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က လက်ကမ်းပေးမှာပါ” လို့ ကျွန်တော် သတင်းစကားတစ်ခု ပါးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခွဲလောက်အတွင်းမှာ ပြဇာတ်ဆန်တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေ စတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ် ငါးစုလောက် အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှုဟာ စတင်ဖြေလျော့လာပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာ ပြောင်းလဲမှုအတွက် ဆန္ဒဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုတော့ အစိုးရအဖွဲ့ကို အရပ်သားတစ်ဦးက ဦးဆောင်နေပြီး ပါလီမန်ကလည်း ကိုယ်တိုင်အားကောင်းမောင်းသန် ရပ်တည်နေနိုင်ပါပြီ။ တစ်ချိန်က တရားမ၀င် ကြေညာခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်း ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာ ၀င်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်း လွှတ်တော် အမတ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါပြီ။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ ရာပေါင်းများစွာကိုလည်း ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးသလို အဓမ္မခိုင်းစေမှုကိုလည်း ပိတ်ပင်ပြီးပါပြီ။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ကနဦး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုတွေ ရခဲ့ပြီဖြစ်သလို ပိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ စီးပွားရေးအတွက် ဥပဒေသစ်တွေလည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။
ပြည်သူတွေရဲ့ အတူတကွ စုဝေးခွင့်ကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေမယ့်အစား အပြည့်အ၀ လေးစားမှုပေးရပါမယ်။ ဖိနှိပ်ပိတ်ပင်နေမယ့်အစား မီဒီယာအပေါ် ဆင်ဆာလွှမ်းမိုးထားတာကို ဆက်ပြီး ရုပ်သိမ်းပေးရပါမယ်။ ဒီခြေလှမ်းတွေကို ဆက်လျောက်လာနိုင်တာနဲ့အမျှ ခင်ဗျားတို့ တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို နိုင်ငံသားတွေက ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့ အသံကို လျစ်လျူမရှုဘဲ နားထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို တရားမ၀င်မလုပ်ဘဲ ပါဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကာလ အတွင်းမှာ မဲဆန္ဒရှင်တစ်ယောက်က ”ကျွန်တော်တို့မိဘတွေ၊ ဘိုးဘွားတွေ ဒီအတွက် စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါမှ မြင်မသွားခဲ့ရပါဘူး” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ လူသားနဲ့ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကြားထဲမှာ အင်အားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ။ စစ်ပွဲတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ။ အတိတ်နဲ့ မတူတော့တဲ့ အနာဂတ်ကို ကြောက်ရွံ့တာ။ ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ စီးပွားရေးကို ပြန်လည်နေရာချထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ။ ပုံစံမတူတဲ့ လူတွေကို၊ နေရာမတူတဲ့ လူတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ။ ကိုးကွယ်မှုပုံစံမတူတဲ့ လူတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရဲ့ အမှောင်မိုက်ဆုံးကာလ အကျဉ်းချခံထားရစဉ်မှာ သူဟာကြောက်ရွံ့မှုမှ လွတ်မြောက်ရေးအကြောင်းကို အက်ဆေးရေးခဲ့ပါတယ်။ အာဏာကို စွဲကိုင်ထားတဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ လူတွေက ရှုံးနိမ့်မှာကို ကြောက်ရွံ့ကြတယ်လို့ သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ ‘အာဏာကို စွဲကိုင်ထားတဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ လူတွေက ရှုံးနိမ့်မှာကို ကြောက်ရွံ့တယ်။ အာဏာကို အသုံးချပြီး ပျက်စီးနေတဲ့သူတွေက အာဏာရဲ့ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုကို ကြောက်ရွံ့ပါတယ်’။
‘ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေက ခင်ဗျားတို့ကို နောက်ကျန်ရစ်စေခဲ့ နိုင်ပါတယ်။ အာဏာဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုဆီက လာတာမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဆီကနေ လာတာဆိုတာကို နားလည်လာနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ အခုအချိန်ဟာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာပြီး အပြောင်းအလဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်နေရမယ်လို့၊ ခုချိန်ဟာ ကွဲပြားခြားနားနေရမယ်လို့ အခိုင်အမာဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးခဲ့သလို ‘ကြောက်ရွံ့မှုဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူသားရဲ့ သဘာဝအခြေအနေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ’ ကို ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့မှုဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ ဘ၀ရဲ့ သဘာဝအခြေအနေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကမ္ဘာကို ခင်ဗျားတို့က ဒီနေ့ဖော်ပြနေပါပြီ။
အကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ဦးက သူ့နိုင်ငံသားတွေကို ပြောတဲ့အခါမှာ အခုလို ထည့်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ‘နိုင်ငံရေးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အလုပ်ပဲ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်တင် မဟုတ်ဘူး။’ အမေရိကန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြောလေ့ရှိတာက ဒီမိုကရေစီအတွက် အရေးကြီးဆုံး ရုံးဟာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ရုံးပါ။ သမ္မတမဟုတ်သလို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေပါ။
အင်္ဂလိပ်လို .. Transcript မတွေ့ရသေးပါ..။
လောလောဆယ်တော့.. America ကို.. အမေရိကန်နိုင်ငံမလုပ်ထားတဲ့အတွက်.. အမေရိကပဲရေးတဲ့အတွက်.. အီလဲဗန်င်းမီဒီယာကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း..။
မှာတက်လာတဲ့.. ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ မူရင်းအတိုင်း(အရင်စာတွေဖျက်ပြီး) ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်..
United States of America ကို.. အမေရိကန် ပြန်လုပ် ဘာသာပြန်ထားတဲ့အတွက်.. အမေရိကရောက်မြန်မာတဦးအနေနဲ့.. ကန့်ကွက်ကြောင်း…။
မှတ်မိသလောက် MRTV-3 မှာ junta နဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဟာတွေကို ဘာသာပြန်မပြောသွားဘူးခင်ဗျ။
MRTV –4မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာလို့ ပြောသွားတာကြားလိုက်ရသလိုပဲဗျ..။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာလို့ ဘာသာပြန်တာ က နောက်ပိုင်း တိုးတိုးလေးဖြစ်နေတယ်။..။ စစခြင်းတော့ ဘာသာပြန်တာက တော်တော် အသံကျယ်တယ်နောက်ပိုင်း ကျတော့ အိုဘားမား သံကကျယ်ပြီး မြန်မာလိုပြန်တာ က အရမ်းတိုးလွန်းလာတာ တွေ့ရာ (နားထောင်)ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မင်္ဂလာပါ ဆိုတော့ Myanmar လို့များ ပြောသွားတာလား…
မြန်မာလို..မြန်မာဘာသာစကားနဲ့..” မြန်မာနိုင်ငံ မင်္ဂလာပါ “လို့ပြောလိုက်တာပါ..။
ဒါဆို ကျန်တဲ့စကားတွေထဲမှာရော… ဘယ်လိုပြောသွားပါသလဲဆို…
အပေါ်မှာရေးထားတာ.. အပြည့်အစုံတော့ ဟုတ်ပုံမရပါ..
နောက်ဆုံး..” ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ကိုတော့.. မြန်မာလို မြန်မာစကားနဲ့ပြောတယ်လို့.. သိရကြောင်း..
သဂျီး..လုံမမေးချင်တာကလေ… ကျန်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကို Myanmar လို့ ပြောသွားသလား..Burma လို့ ပြောသွားသလားလို့..
သဂျီးမှာ အသံဖိုင်တွေ၊ English Transcript တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင် ရှိပြီးတဲ့အခါကျရင် ပြောပြပါလို့… ရုပ်မြင်သံကြားက ဘယ်တော့ ပြန်လွှင့်မလဲဆိုတာ မသိသေးလို့..
မိန့်ခွန်းမှာပြောသွားတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တို့ က ဒီတက္ကသိုလ်မှာပဲ မဂ္ဂဇင်း ၊ ဂျာနယ်တွေ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ကိုလိုနီအစိုးရကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ တယ်ဆိုတာတွေ။ ဦးသန့်လည်း ဒီ တက္ကသိုလ်ကထွက်ခဲ့ တယ်ဆိုတာတွေ။ နောက် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် က အမေရိကန် စစ်သားတွေ ဒီမှာ အသက် ပေးသွားတယ်ဆိုတာတွေ ပါတယ်ဗျ.။ ဒီမှာတော့ မတွေ့ရဘူး…။ အခုဟာက သူပြောခဲ့တာထက်..။ ကြိုတင်မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက် များဖြစ်နေမလားလို့..။
မိန့်ခွန်းဟာ.. အပြည့်မဟုတ်.. ဖြတ်ခံထားတာသေချာပါတယ်..။
English Transcript လိုချင်နေပါကြောင်း..။ :harr:
သူကြီးရေ….English Transcript ရရင်တင်ပေးပါ…ကျနော်လည်း tweeter ကရသလောက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
Air Force 1 wheels up at Rangoon International Airport
President #Obama waves at #Burma, after successful historic visit pic.twitter.com/DWqwUrAB
Pres #Obama: Something is happening in this country that cannot be reversed. … You will have in the U.S.apartner in that long journey.
Pres #Obama: We have an expression in the U.S.: the most important office in the U.S. is “citizen” — crowd applauds.
Pres #Obama: The U.S. will beafriend to any nation that respects the rights of its citizens and the responsibilities of international law.
Pres #Obama: Here in Rangoon I want to sendamessage across Asia: we don’t need to be defined by the past.
Pres #Obama: Quotes Aung San Suu Kyi’s essay “Freedom from Fear.” … “Fear is not the natural state of civilized man.”
Pres #Obama: If U.S. can transcend its difference, then yours can too. Diversity can bea“source of strength.”
Pres #Obama: The Rohingya hold within themselves the same dignity as you do and I do.
Pres #Obama: “No process of reform will succeed without national reconciliation.” Crowd in the speech erupts in applause.
Pres #Obama: “This country is blessed with diversity.” … “There are pagodas and temples and mosques standing side by side.”
Pres #Obama: “Reform must reach the daily lives” of those who are hungry, ill, or lacking. Today proud to establish USAID mission in Burma.
Pres #Obama: On Burma’s journey toward democracy and economic development, America will support you “every step of the way.”
Pres #Obama: Your country will be stronger if it draws on the strength of all of its people. That’s what allows nations to succeed.
Pres #Obama: Under Pres Thein Sein, the desire for change has been met with an agenda for reform.. I’ve come to extendahand of friendship.
Pres #Obama: Through decades of differences, Americans have been united in their affection for this country and its people. …
Pres #Obama: I came here because of the importance of this country… because of the beauty…. because of my respect for this University…
Hundreds and hundreds of others also in attendance, including civil society, relgious, political and cultural figures.
Audience gathered inside Univ. of Yangon for the speech includes Secy of State Hillary Clinton and Daw Aung San Suu Kyi, seated together.
Source : https://twitter.com/USEmbassyBurma
ဘာမှမသိရပေမယ့် ယခုလိုဖော်ပြပေးကြသည်ကို အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း
ပိုမိုတိကျသည့် အကြောင်းအရာများကိုလဲ မျော်လင့်နေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း
မူးရင်းတိုင်းကို မဖျက်ပဲ ပြန်ပေးထားတဲ့ သတင်းအပြည့်စုံလေးလဲ သိချင်ပါသေးတယ် အရပ်ဂဒို့ ရဲ့
ပြည်နယ်ခွဲထွက်ဖို့၊ တောင်းဆိုခံထားရတဲ့ အရေး တွေကို ဘယ်လို ဆက်ရှင်းမလဲ ဆိုတာ
သဂျီး ခန့် မှန်းပေးပါဦး
မှတ်မိရသလောက် တက်ကဆက် က အများဆုံးဆိုလား
သူကြီးရေ…youtube မှာမိန့်ခွန်းပြောနေတာကို DVB ကတင်ပေးထားပါတယ်…
…http://www.youtube.com/watch?feature=player-embedded fv=TAeJJnqhbo …
Youtube ကနေ Obama speech at University of Yangon -DVB Live ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရှာရင်လည်းရပါတယ်…
အမေစုနဲ့ အိမ်ထဲမှာ စကားပြောကြပြီး…
အပြင်မှာ စောင့်နေကြတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို
အမေစု က အရင်ပြောပါတယ်…
ပြီးတော့ အိုဘားမား ပြောပါတယ်…
အိုဘားမား ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ အမေစု မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်စတွေ ၀ဲလို့ဗျာ…
အမေစုက အိုဘားမားလက်၂ဘက်ကို ကိုင်ပြီး စကား ပြောပါတယ်…
ပြီးတော့ အိုဘားမားက အမေစု ရဲ့ ပါး၂ ဘက်ကို
သားတစ်ယောက်က အမေ့ပါးကို နမ်းလိုက်သလိုပါပဲ…
ဘယ်ဘက်ပါးများဆိုရင် နှာခေါင်းတောင် ပါသွားသေးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်…
ပြီးတော့ အမေစု ပုခုံးကို တယုတယ ဖက်လို့ အိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ…
သမိုင်းဝင် ဂန္ထ၀င် အမူအရာလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါပြီဗျာ…
ကားပေါ်ကို အမေစုက ပြန်ပို့ပါတယ်…
အဲဒီမှာတစ်ခါ အိုဘားမားက အမေစု ရဲ့ ပါးကို အပ်ပြန်ပါတယ်…
အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့…
အိုဘားမားနဲ့ အမေစုတို့ရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို
Transcript တွေ့လို့အပေါ်ပို့စ်ထဲပဲ.. ပေါင်းထည့်လိုက်ပါတယ်..
ဘကြီးစိန်ရဲ့ စူးရဲတဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ကြည့်တဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်ရှာလို့
ဆယ်ကျော်သက်မလေး လို ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေတဲ့ ပုံရော
ရှက်လည်း ရှက်ဘူး .. အဟိ ..
သူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ ဖတ်မိသလောက်တော့ …
ပညာရေး နဲ့ လူငယ် တွေကို အတော် တန်ဖိုးထားကြောင်း တွေ့ရသဗျ ..
ဒါတွေက တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ အနာဂါတ်လို့ ယူဆပါတယ် …
ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က သေချာ အကျအန မသင်ခဲ့ရ၊ မတတ်ခဲ့ရတာတွေကို နှမြောမိသလို ….
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးထဲမှာ ခြေချခွင့် မရခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝကိုလည်း မကျေမနပ် ပြန်ဖြစ်မိပါရဲ့ဗျာ …
‘ A kiss on the cheek ‘ က ‘ just friends ‘ လို့ဆိုသတဲ့…
အိုဘားမားကြီး အမေစုကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်း ထွေးပွေ့လိုက်ပြီးတော့ ပါးကို
တစ်ရှိုက်မက်မက်(အမေစု ရှက်သွေးဖြာသွားပုံကိုကြည့်ပြီး ဂလို တင်စားရခြင်းဖြစ်)
နမ်းတာကို ကြည့်ပြီး အိုဘားမားက တော်တော် Romantic ဖြစ်ပါလားလို့
တွေးမိသွားတယ်…အမေစုတောင် ဒီလောက်…Michelle တော့..
OBAMA embraces Democracy in Burma ဆိုတဲ့ အသုံးကို ရေရေလည်လည်ခိုက်သွားပြီ
နောက်ပြီး မိန့်ခွန်း အစကနေ အဆုံးထိ ဒီလို သမိုင်းဝင်စကားတွေကို စာရွက်မကြည့်ပဲ လက်တန်းပြောသွားနိုင်တာကလည်း လက်ဖျားခါလောက်ပါတယ်။
အမေရိကရဲ့ သမ္မတဖြစ်လာတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ အရည်အချင်း စွမ်းပကားကို ကိုယ်တွေ့ မြင်လိုက်ရပါတယ်။
အဓိကပြသွားတာက ဒီစကားလုံးတွေဟာ စာရွက်ထဲမှာတင် ရှိတာ မဟုတ်ဖူး ရင်ထဲ ကလာပြီး ဦးနှောက်ထဲမှာ သိမ်းထားတယ် ဆိုတာကို ပြလိုက်တာပါ။
အော်ရယ် …… ဟားဗတ်ကျောင်းထွက်တို့ရယ်…..
အိုမြန်မာတွေ နိုးကြားလို့ ကြိုးစားကြဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ…
correct or not i don’t know but just sharing what i found on the net.
” အိုဘားမား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာ မိန့်ခွန်းပြောသွားလိုက်တာ ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မိန့်ခွန်းပြောကြားချက်တွေနဲ့ တစ်လုံးမှမလွဲပဲနဲ့ ဒက်ခနဲ ဒက်ခနဲ ပြောသွားလိုက်တာ အံသြစရာပါပဲ ။ဘာကြောင့်များပါလိမ့် ။ဒို့နိုင်ငံကလူကြီးမင်းများကရော ဘာလို့ မိန့်ခွန်းတွေပြောတိုင်း စာရွှက်ကြီးတွေငုံဖတ်နေရတာပါလိမ့် ။ဒါကဒီလိုရှိပါတယ်တဲ့ ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ခန်းမကြီးထဲက အိုဘားမား စကားပြောစင်ရဲ့ ရှေ့မှာ ဖန်plate ပြားလေးနှစ်ခု ထောင်ထားတာ တွေ့မိကြမယ်ထင်ပါတယ် ။
မသိရင်ပဲေ၇ဒါလိုလို ကျည်ကာလိုလိုနဲ့ပေါ့ဗျာ ။တကယ်တော့ အဲဒီဖန်ပြားလေးတွေကို Teleprompter လို့ အမည်တွင်ပါတယ် ။သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ တဖက်က ကွန်ပျူတာကနေ အဲဒီ Teleprompter ဆီကို စာတွေပို့ရပါတယ် ။ အလုပ်တွေမှာ ပရောဂျက်တစ်ခုကို ပရိုဂျက်တာနဲ့ ထိုးပြတဲ့သဘောပါပဲ ။
အခုလို ပြောရမယ့် မိန့်ခွန်းတွေကို Teleprompter plate လေးထောင်ထားတော့ ပြောကြားမဲ့သူဟာ လူထုကို တည့်တည့်ကြည့် ဝေ့ကြည့်ပြီး ပြောလို့ရတယ် ။ဟန်လည်း မပျက်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာ ။များသောအားဖြင့် သတင်းကြေငြာသူတွေ အသုံးများတယ်ပေါ့ ။ ကင်မရာတွေမှာ အဲဒီပလိတ်ပြားလေးတွဲဆင်ထားသော သတင်းကြေငြာသူဟာ ပလိတ်ပြားလေးကို ကြည့်ပြောနေတော့ သူဟာကင်မရာကိုပါကြည့်ပြိးသား ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှာတော့ ပရိသတ်ကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး ပြောနေသလိုဖြစ်သွားရတာပေါ့ ။ အခု အိုဘားမားက Teleprompter သုံးပြီးပြောသွားတော့ လူထုကိုပါ ကြည့်ပြီး ပြောသလိုဖြစ်တဲ့အတွက် လူထုရဲ့ အင်ပရက်ရှင်ပါရတာပေါ့ ။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဟန်လည်း မပျက်ဘူးပေါ့ဗျာ ။”
လင်းယုန်ရဲ့အလံတွေ.. ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမအပေါ်ဘေးတလျှောက်.. စီကာစိုက်ထားတာတွေ့မိသမို့..” ကျောင်းနံရံ တ၀ိုက်မှာ ဒေါင်းအလံတွေ ပြန်စိုက်မယ်”ဆိုတဲ့.. ကိုမင်းကိုနိုင်စကားလေး.. သတိရမိတယ်..
“လင်းယုန်နဲ့အတူ…ဒေါင်းပြန်လာပြီ..” လို့.. ကနဦးကောက်ချက်ချမိကြောင်း….။
ခုလိုဘာသာပြန်ပေးတဲ့ သူကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
ဒေါင်းလုပ် လင့်ပေးတဲ့ သူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
ကူးရုံ ကူးထားရသေးတယ် မဖဖတ်အားသေး လို့ ။
ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံး ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျ။ (ဆိုင်မဆိုင် တော့ သိဘူးနော် )
ပြောသွားသမျှထဲမှာ “a true revolution of the spirit begins in each of our hearts” ဆိုတာလေးကို သဘောအကျဆုံးပါပဲ။ Green Rose တို့တိုင်းပြည် တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးမှာ အဲဒီ့အချက်က အဓိကအကျဆုံးပဲလို့ မြင်ပါတယ်။ အပေါ်ယံ တွေပြောင်းလဲနေယုံနဲ့တော့ မလွယ်သေးပါဘူး။ အစိုးရအပြောင်းအလဲ၊ အုပ်ချုပ်သူအပြောင်းအလဲ၊ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ.. ဟိုအပြောင်းအလဲ… ဒီအပြောင်းအလဲ.. အဲဒါတွေအားလုံးထက် အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာက တစ်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ လူထုရဲ့ ရင်ထဲက အပြောင်းအလဲပါ။ Green Rose မြင်နေရသလောက်တော့ Green Rose တို့တွေ မပြောင်းလဲကြသေးပါဘူး။ အရင်အကျင့်တွေရှိနေတုန်း၊ အရင်စိတ်ဓါတ်တွေ ကျန်နေတုန်း၊ ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်ဆွဲနေကြတုန်းလို့ပဲမြင်ပါတယ်။ အမေစုနဲ့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်တို့ ရှေ့ကနေ အပင်ပန်းခံပြီး ကြိုးစားနေတာကို နောက်ကနေ ဒရွတ်ဆွဲပြီး လိုက်နေကြတုန်းလို့ပဲမြင်ပါတယ်။
မီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍ အရမ်းအရေးကြီးနေပါပြီ။ ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကို စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အသိပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတင်မကပဲ အနှစ်သာရကိုပါ နားလည်အောင် ဖြန့်ဝေပေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
အိုဘားမားက လက်ဝဲယိမ်းလစ်ဘရယ်တယောက်ပါ..။ သူက” ပြောင်း”ဆိုတာပြောရင်.. ညာဖက်..ကွန်ဆာဗေးတစ်ကိုကြည့်ပြောတာများပါတယ်..။
မြန်မာတွေ…ရှေးစွန်းစွဲတွေ.. လွှတ်ချပြီး..ရှေးရိုးစွဲ(conservative)လောက်နဲ့.. ရပ်တည်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ.. တော်တော်ဟုတ်နေပါပြီ..။
မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့.. ရင်ထဲစူးနေတဲ့.. အစွန်းရောက်ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်တွေ…ခေတ်နဲ့ညှိလိုက်ပြောင်းပေးသင့်ပါကြောင်း..။
ယနေ့ကျနော်တို့မြင်တွေနေရတဲ့ တိုးတက်ပြေင်းလဲမူတွေဟာ…”Soft Power” ရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကြောင့်ပါပဲ…ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမူမရှိရင် ယနေ့အထိဒီလိုအခြေအနေကို ကျနော်တို့မြင်တွေ့ရမဖို့ မရှိနိုင်သေးပါဘူး…
Upon the world to embrace four fundamental freedoms:freedom of speech,freedom of worship,free form want.and freedom form fear.These four freedoms reinforce one another,and you cannot fully realize one without realizing them all.
အားလုံးကိုအမှန်တကယ်နားမလည်ပဲ တစ်ခုကို အမှန်တစ်ကယ်နားလည်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး..
အမေရိကန်သမ္မတ မစ္စတာဘားရက်အိုဘားမား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင့်သဘင် ခန်းမတွင်းဝယ် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် သူ၏ လက်ဝဲ လက်ယာ နှစ်ဖက်၌ Teleprompter ခေါ် ကိရိယာ နှစ်ခုကိုတပ်ဆင်ပေးထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ယင်း Teleprompter ကိရိယာ၏ ရုပ်မြင်မှန်ပြားဝယ် မိန့်ခွန်းစာသားများ ပေါ်လာခြင်းကို မစ္စတာ အိုဘားမားက မြင်နေရသည်။ အဆိုပါ Teleprompter ကိရိယာမျိုးကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ၃၆ ဦးမြောက် သမ္မတ လန်ဒန်ဘီဂျွန်ဆင် လက်ထက်ဖြစ်သော ၁၉၆၄ ခုနှစ်ကတည်းကပင်လျှင် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
@Popular Myanmar News Journal
White House သမတ အိမ်တော်က ဗီဒီယိုပါ
ဒီက လင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ
ပုံပိုကြည်ပြီး ပုံတွေပိုဆုံတာ (ပရိသတ်ပါ, ပါ)
ဘယ်လိုမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီး ပြောပါသလဲ kai ရယ်……..
မဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ဘာသာမတူ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်
သူ့အကြိုက်၊ ကိုယ့်အကြိုက် ဟင်းတစ်ယောက်တစ်ခွက်စီနဲ့
ချိနဲ့နဲ့မွဲတဲတဲ လူတစ်ယောက်က ခပ်လန်းလန်းလူတစ်ယောက် ကိုယ့်ဆီလာတာကို
ဂုဏ်ယူနေရသလိုဖြစ်နေဘီ ( ယူလည်းယူရဒေါ့မှာပေါ့ )
တစ်ခုရှိတာက နေပျီဒေါ်ဆိုတာဂျီးကို သောက်ရေးမလုပ်ဘဲ ဖိနှပ်ခံခဲ့ရတဲ့ အဲ့သည်အဆောက်အဦးကြီးကို
ခင်ဗျားတို့ငြိမ်မခံနဲ့ ပြန်ချကြ ကျုပ်ကူညီမယ်လို့ ခပ်တည်တည်ပြောသွားတာရယ်က
မေမေကြီးမျက်ရည်တွေဝဲသွားတာလည်း အလွန်ထိရောက်တဲ့ အက်ရှင်တစ်ခုလို့တောင်ပြောနိုင်မလားဘဲ
အဲ့သည်မိန့်ခွန်းတွေ ကျောင်းသုံးစာအုပ်ထဲ ထည့်သင်မယ်လို့ ခပ်တီတီနဲ့ကျပ်ကြည့်ဘာဘား
အမေရိကားနဲ့..အမေရိကန် မကွဲတာကလွဲလို့.. ဖြတ်ထားပုံမရပါဘူး..
အိုဘာမားက အမေစုကို နှစ်ခါနမ်းတာ သနပ်ခါးနံ့ ကိုသဘောကျသွာလို့ဖြစ်ရမယ်
ငါ့တို့ဆီက ရီဘယ်လွန်တို့ မေဘယ်လင်းတို့ထက်မွှေးတယ်ဟ ဆိုပြီး